Xanaano maalmeedka - InfoFinland
Nolosha Finland > Waxbarashada > Barbaarin-horaadka
Barbaarin-horaadka waxaa loogu galagalay carruurta ka yar da’da dugsiga lagu galo . Finland, degmooyinka ayaa bixiya barbaarin-horaadyada, waxeyna ku bixiyaan meelaha ay ka midka yihiin xannaano-maaleedyada. Waxaa intaas dheer oo jiro xannaano-maalmeedyo gaar loo leeyahay.
Barbaarin-horaadku waa barbaarin, waxbaris iyo xannaano, taas oo qaab waxbarasho loo qorsheeyay yoolalkeedana si fiican looga fikiray. Barbaarin-horaadka waxaa ka shaqeeya macalimiinta barbaarin-horaadka iyo xannaaneeyayaal la tababaray.
Inta badan waalidka midkood ayaa ku haya ilmaha guriga haba ahaato xiliga fasaxa waalidka (vanhempainvapaa) ilmihiina gaarayo 9 billood. Haddaad ilmaha ku heyso guriga waqtigaas kadibna waxaad xaq u leedahay inaad shaqada ka gasho fasax xanaaneynta carruurta ilaa ilmihii ka gaarayo saddex sano. Faahfaahin dheeriya waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Fasaxyada qoyska. Waad ka codsan kartaa Kelada kaalmo dhaqaale guri ku xanaaneynta ilmaha. Ka aqriso xog dheeriya bogga InfoFinlandi Kaalmada guri ku xanaaneynta ilmaha.
Ha geynin xannaano-maalmeedka cunug jirran. Cunuggu waa in uu guriga joogaa xittaa marka ay calaamadaha cudurku yihiin kuwa khafiif ah. Haddii uu cunuggu jirrado marka uu maalinti joogo xanaano-maalmeedka, waa in sida ugu dhakhsaha badan looga soo wadaa xannaano-maalmeedka. Ha geynin xannaano-maalmeedka alaabta lagu ciyaaro ee uu cunuggu leeyihiin.
Faahfaahinta dheeraadka ah ee Korona fayraska ka akhri: Korona Fayraska COVID-19
Samee qiimeynta astaamaha cudurka, haddii aad ka shakiso fayruska KoronaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Haddii aad degaan ku tahay Deegaan Finland, waad u dalbi kartaa carruurtaada booska barbaarin-horaadka degmada markuu kaa dhamaado fasaxa waalidka. Markii ilmuhu gaaraan sagaal billood. Haddii aadan deegaan ku aheyn Finland, markaa waxaa laguu aqoonsan karaa inaad tahay ruux degaan ku ah magaalada aad degan tahay.
Waad ka codsan kartaa booska
Xanaanada carruurta (päiväkoti)
Horin qoys xanaaneedka carruurta (ryhmäperhepäivähoito)
Qoys xanaaneedka carruurta (perhepäivähoito)
Carruurtu waxey xannaano-maalmeedyada ku jiraan kooxo ka waaweyn kuwa kooxaha xannaano-maalmeedka qoyska.
Qoys xanaaneedka carruurta waxaa loola jeedaa in daryeelaha carruurta ku heynayo ilmihii gurigiisa. Qoys xanaaneedyada qaar waxay ku hayaan carruurta horin ahaan guryaha xanaanada carruurta.
Ka dalbo booska babraarin-horaadka magaalada aad ku nooshahay ugu danbeyn afar bilood kahor xiliga aad u baahan tahay xanaaneynta ilmaha. Booska waxaad ku heli kartaa labo isbuuc gudohood, haddii waalidku bilaabayo iskuul ama shaqo.
Kharashka barbaarin-horaadku (varhaiskasvatusmaksu) wuxuu ku xiran yahay
inta uu qoysku ka kooban yahay; iyo
inta saacadood ee uu cunugga todobaadki ka qeybqaato barbaarin-horaadka.
Qiimo dhimis ayaa laga sameynayaa walaalaha. Haddii dakhliga qoysku uu aad u yar yahay, barbaarin-horaadku waxey qoyska u noqon kartaa lacag la’aan. Weydii warar dheeraad adeegyada talobixinta ee degmadaada.
Barbaarin-horaadka gaarka loo leeyahay
Barbaarin-horaadka gaarka loo leeyahay waxay ahaan kartaa
xanaanada carruurta ama horin qoys xanaaneedka carruurta
qoys xanaaneedka carruurta ama
guri, kasoo leh meel wax lagu xanaaneeyo
Booska barbaarin-horaadka waxaad toos u weydiisan kartaa xanaanada carruurta shaqsiyeedka ama horin xanaaneedka carruurta.
Sidoo kale xanaanada carruurta ee shaqsiyeedka waxaad ka raadsan kartaa, kuwa ku xanaaneeya carruurta guriga ama in xanaaneeyaha kuugu yimaado gurigaaga, markaasna waxaad noqoneysaa shaqo bixiye, waana inaad xil iska saartaa gudashada waajibaadka shaqo bixiyaha. Ka aqri faahfaahin dheeriya boga InfoFinlandi Xuquuqda iyo waajibaadka shaqobixiyaha. Qoysku wey ku shaqaaleyn karaa xanaaneyaha gurigooda iyaga iyo qoys kale.
Degmada ayaa ilaalisa baraarin-horaadyada gaarka loo leeyahay.
Qiimaha barbaarin-horaadyada sida gaarka ah loo leeyahay waa mid isbedbeddasha. Si kastaba ha ahaatee Kelada ayaad kaalmo uga heli kartaa. Markaas qiimaheedu ma ahan mid aad uga badan kan barbaarin-horaadka degmada.
Kaalmada xanaanada shaqsiyaadka
Haddii ilmuhu degaan ku yahay Deegaan Finland, waad ka codsan kartaa Kelada kaalmo. Xanaanada carruurtuna waa iney tahay mid degmadu aqbashey.
Waad codsan kartaa kaalmo kharashka xanaanada shaqsiyeedka (yksityisen hoidon tuki), haddii
ilmo ka yar da’da iskuulka kugu jiraan xanaanada carruurta ee shaqsiyaadka; ama
ilmuhu ku jiro xanaano shaqsiyeed kale.
Ma codsan kartid kaalmada xanaanada shaqsiyaadka, haddii xanaaneyuhu yahay xubin qoyska ama xanaaneyaha iyo ilmuhu ku wada nool yihiin isku guri. Ma codsan kartid kaalmada xanaanada shaqsiyaadka haddii barbaarin-horaadkiisu yahay mida degmada.
Cadadda kaalmada hadba waxay ku xiran tahay daqliga reerka iyo degmada ay reerku ku nool yihiin.
Kelada kaalmada waxay toos ugu shubeysaa xanaaneeyaha ama adeeg bixiyaha xanaanada carruurta. Xanaanada carruurta shaqsiyaadku waa iney bixiyaan canshuur. Kaalmadana ma aha mid lagu bixinayo wadanka dibadiisa.
Aqri faahfaahin dheeriya kaalmada xanaanada shaqsiyaadka bogga Kelada.
Keladu waxay leedahay adeeg telefoon oo qoysaska carruurta leh loogu talagalay.
af Finnish, tel. +358 20 692 206
af Iswiidhish, tel. +358 20 692 226
af Ingiriis, tel. +358 20 634 2550
Daneysiga xafiiska Kelada waxaad ka heleysaa adeegyo luuqado kale oo laguu turjumayo.
Cawinaada isticmaalka daryeelka gaarka loo leeyahayFinnish | Iswidish | Ingiriis
Maxaa lagu qabtaa barbaarin-horaadka?
Howlaha lagu qabto barbaarin-horaadka waa noocyo badan tahay, tusaale ciyaar, jimicsiyo, banaan joog, muusik, alaab-alaabey iyo dalxiis. Maalintana nasiino yar ayaa ku jirta. Ujeedadda howlaha waxay tahay sidii lagu horumarin lahaa waxbarista iyo barbaarinta ilmaha. Ilmuhu waxay sidoo kale ku baranayaan qabsashada waxyaabaha daruuriga. Ilmaha waxaa lagu caawin oo dheeriya barashada afka finnishka iyo swiidhishka, haddii afkiisa hooyo yahay luuqad kale. Haddii uu u baahanyahay cunuggu wuxuu heli karaa waxbarasho gaar ah.
Xanaanada carruurtu ma aha iskuul. Carruurta lama barayo maadooyinka iskuulka, mana jirto xiisado ay galayaan.
Carruurtu saddex jeer ayey inta maalinta lagu jiro cunayaan: quraac, khado iyo casiriye. Haddii ilmahaagu cunin cuntooyinka qaarkood u sheeg macallimiinta barbaarin-horaadka.
Barbaarin-horaadka waa loo qadarin diinta qoysku heystaan ama waxay aaminsan yihiin.
Inta badan maalmaha xannaano-maalmeedku waxay bilaabataa subaxii waxayna ku ektahay galabtii Xanaanooyin qaar ayaa furan habeen iyo maalinba, hadey waalidku shaqo ama iskuul ku maqan yihiin.
Eray-bixinta xannaano-maalmeedka(pdf, 754 kt)Soomaali | Bershan | Carabi | Kurdish
Xannaano-maalmeedyada afka ingiriiska
Finland waxaa ku yaal xannaano-maalmeedyo badan oo afka ingiriiska ku shaqeeya gaar ahaan magaalooyinka waaweyn. Inta badan xannaano-maalmeedyada afka ingiriisku waa kuwa gaar loo leeyahay. Xannaano-maalmeedyada afka ingiriiska ee degmooyina waxaa sidoo kale ku jirta carruurta qoysaska ku hadla afka Finnishka, kuwaas oo xanaano-maalmeedka ku baranaya afka Ingiriiska.
Magaalooyinka waa weyn waxaa sidoo ku yaal xannaano-maalmeedyo luqadaha laga isticmaalo ay yihiin luqado kale, tusaale ahaan afka Jarmalka, Faransiiska ama Isbaanishka.
Degmooyinka, hay’adaha iyo mowlacyada ayaa u qabanqaabiya carruurta naadi maalmeed. Saacadaha naadiga inta badan waa labo saacadood.
Naadiga waxaa u qorsheysan oo ciyaaro, heeso, alaabalaabey iyo barnaamijyada kaleba oo niddaamsan.
Macluumaad ku saabsan barbaarin-horaadkaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 10.08.2020 Boggan war-celin ka soo dir